အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ တင်ကြီးပြီးလှလာစေမယ့် ရက် ၃၀ စာလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုး – MyStyle Myanmar
အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ တင်ကြီးပြီးလှလာစေမယ့် ရက် ၃၀ စာလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုး
အိမ်မှာနေတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ တင်ကြီးပြီးလှလာစေမယ့် ရက် ၃၀ စာလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုးလုံးကို တစ်ရက်မပျက်ပဲ နေ့တိုင်း ပုံမှန်လုပ်သွားပေးရပါမယ်။ တကယ်သိသာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် အချိန်နည်းနည်းတော့ ပေးရမှာဖြစ်သလို နည်းနည်းလည်း ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းခဲ့သလောက် ရက် ၃၀ ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သိသာတဲ့ရလဒ်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာနေတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ လှလာစေမှာဖြစ်လို့ Try ကြည့်သင့်ပါတယ်နော်။
၁. ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို နည်းနည်းကားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆုပ်ကာ ထိုင်ထ အခါ ၃၀ လုပ်ပါ။ တစ်ဝက်ပဲထိုင်ချပါ။
၂. လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ထားပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို နောက်ပစ်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက်နဲ့ ဘယ်၊ ညာ တစ်ဖက်ကို အကြိမ် ၃၀ စီ လုပ်ပေးပါ။
၃. ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကားပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လက်နှစ်ဖက်ကို အောက်ကိုဆန့်ချကာ ထိုင်ထလုပ်ရပါမယ်။ တစ်ဝက်ပဲထိုင်ပါ။ မတ်တပ်ပြန်ရပ်တဲ့အခါမှာလည်း လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်ကို ဆန့်ထုတ်ထားပါ။ ခြေဖဝါးကိုလည်း ပင့်ထားပါ။ ဒီထိုင်ထကိုလည်း အခါ ၃၀ လုပ်ပေးပါ။
၄. ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းနောက်မှာထားကာ တစ်ဝက်ထိုင်ပါ။ ပြန်ထတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြှောက်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ခေါင်းနောက်မှာပဲထားပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်း ဘယ်၊ညာ တစ်ဖက်ကို အကြိမ် ၃၀ စီလုပ်ပေးပါ။
၅. လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ပြီး တစ်ဝက်ထိုင်ပါ။ ပြီးရင် ခြေဖဝါးထောက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ပြီးရင် ပြန်ထိုင်ပါ။ ဒီထိုင်ထကိုလည်း အခါ ၃၀ လုပ်ပေးပါ။
၆. ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုစုပြီး လက်နှစ်ကိုဆုပ်ကာ ထိုင်ထလုပ်ရပါမယ်။ တစ်ဝက်ပဲထိုင်ရမှာပါ။ ဒီထိုင်ထကိုလည်း အခါ ၃၀ လုပ်ရပါမယ်။
၇. ပထမပုံမှာပြထားတဲ့အနေအထားအတိုင်းစနေပါ။ ပြီးရင် နောက်ပို့ထားတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကွေးချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပထမပုံထဲကလို ပြန်နေပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ ခြေထောက်ကို ဘယ်၊ ညာ တစ်လှည့်စီပြောင်းပြီး တစ်ဖက်ကို အကြိမ် ၃၀ စီလုပ်ပေးပါ။
၈. ခုနကလိုပဲ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ကွေးချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မတ်တပ်ပြန်ရပ်ပါ။ ပြီးရင် ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ပြန်ကွေးချပါ။ ဒီအတိုင်း ခြေထောက်ကို ဘယ်၊ ညာ တစ်လှည့်စီ တစ်ဖက်ကို အကြိမ် ၃၀ စီ လုပ်ပေးပါ။
၉. လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခါးနည်းနည်းကုံးပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးထုတ်ပါ။ ပြီးရင် ခြေထောက်ပြန်စုပါ။ ဒီအတိုင်း ခြေထောက်ကို ဘယ်၊ ညာ တစ်လှည့်စီ တစ်ဖက်ကို အကြိမ် ၃၀ လုပ်ပေးပါ။
၁၀. ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို နည်းနည်းကားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကာ တစ်ဝက်ထိုင်ချပါ။ ပြီးရင် ခြေဖဝါးထောက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ပြီးရင် ထောက်ထားတဲ့ ခြေဖဝါးကို ပြန်ချပါ။ ပြီးမှ ပြန်ထိုင်ပါ။ ဒီထိုင်ထကျတော့ အဆင့် ၃ ဆင့်လုပ်ရတာပေါ့။ လုပ်ရမယ့်အကြိမ်အရေအတွက်ကလည်း ၃၀ ပါပဲ။
တင်ထွက်အောင်၊ တင်ကြီးအောင် အဓိကအသားပေးပြီးလုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်ထလုပ်ရတာပဲများပါတယ်။ စစလုပ်ချင်မှာတော့ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်လောက်က ပေါင်တွေအောင့်တာ၊ ခြေထောက်နာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မရပ်လိုက်ပဲ ဆက်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်နော်။
MyStyle Myanmar2020-10-06T15:31:37+06:30October 5th, 2020|Fitness, လေ့ကျင့်ခန်းများ – Workout Plans, လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ‌လေ့ကျင့်ခန်းများ – Quick Workouts|